कामको ज्याला माग्दा रडले कुटिए ! युरोप लाने भन्दै म्यानपावरले ठग्यो लाखौं ( भिडियो सहित )
आजको सिधा कुरा जनता संगमा विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत गरियो। एक दलालले युरोप लैजाने सपना देखाउदै लाखौ रुपया ठगेका छन्। भेरी ओभरसिस नाम को मेनपवारमा लाखौ रुपया बुझाएका २ सय भन्दा बढी युवाको पैसा डुबेको छ। आफुलाई भेरी ओभरसिज मेनपावरको आँफूलाई निर्देशक बताउदै बाबु राजा सिग्देललेयुवाहरु संग ५० हजारदेखि ६ लाख ५० हजारसम्म लिएर फरार भएका छन् । पिडित बनेका युवाहरुले बैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन् ।
पिडित युवाहरुलाई कामक लागि अफगानिस्थान , चेक रिपब्लिक, माल्टा, पोल्याण्ड तथा लिवियामा कामदार भिषामा पठाउने भन्दै सिग्देले पैसा लिएका थिए । तर विदेश पठाउनु त परको कुरा २ महिनादेखि बाबुराजा नै बेपत्ता छन् । फरार भएका बाबुराजाको नम्बर कहिलेकाँही चेक रिपब्लिकमा अनलाइन देखाउने गरेको तर फोनमा म्यासेजको जवाफ आउदैन। भेरी ओभरसिज अर्कै को नाममा दर्ता रहेको तर उनले किर्ते गरि उक्त नाममा म्यानपावर चलाएको भेटिएको हो।
ठगिएका पिडित युवाहरु विगत २ महिनादेखि न्यायका लागि भन्दै विभाग र अपराध महाशाखा धाइरहेका छन्। तर अझै उनीहरुको समस्या सुनुवाई हुन् सकिरहेको छैन। विभागले भने ठग बाबुराजाको वास्तविक पहिचान नखुलेकाले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सकिरहेको छैन। उता पीडित युबाहरु भने विदेश जाने र पैसा कमाउने भन्दै चर्को ब्याजमा लिएको ऋण बात पिडित बनेका छन्। उनीहरु लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्दै समस्यामा परेका छन्।
कविता नेपालीले जितिन एपी१ टिभिको बुगीउगी डान्स रियालिटी शो ( भिडियो सहित )
नेपाल आइडलको स्टेजमा रुवाबासी, अमितले गाउदा इन्दिराको रोकिएन आसु ( हेर्नुस भिडियोमा )
प्रदिप खड्काको सुपरहिट फिल्म ' प्रेमगीत २ ' हेर्नुस पुरा फिल्म
Previous Article काम रोक्ने संग कड्किए कुलमान : एक दिन काम रोकिए थुनिदिन्छु ( भिडियो सहित )
Next Article तपाइको आज शुक्रबारको दिन कस्तो छ ? हेर्नुस आजको राशिफल